Maitiro ekudzidzira mushonga wakachengeteka kuchengetedza nevana kumba - Wellness | Chikunguru 2021
Checkout Nharaunda Info Info, Nhau Kambani, Hutano Dzidzo Nharaunda, Kambani Wellness Kambani, Info Info Hutano Dzidzo, Nhau Zvinodhaka Vs. Shamwari Kambani Zvipfuwo Zvinodhaka Info Dhinda Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Dzidzo Yehutano
Kuru >> Wellness >> Dzidzira kuchengetedza mishonga isingakuvadzi nevana kumba
Dzidzira kuchengetedza mishonga isingakuvadzi nevana kumba
Mishonga inowanzova mishonga, inopa rubatsiro kana iwe uchirwara. Asi, mumaoko evana, vanogona kuva nengozi, kunyange kuuraya. Muna 2017 chete, paive nekushanya kunopfuura zviuru makumi mashanu kuimba yekukurumidzira nevana vari pasi pemakore matanhatu nekuda kwetsaona yemishonga netsaona, sekureva kweKachengeteka Vana, isingabatsiri inoshanda kubatsira kuchengetedza vana kubva mukukuvara. Mune huwandu hwakawanda hwezviitiko izvi, vana vakawana zvinodhaka apo vatarisiri vakanga vasina kutarisa.
Mubereki wese uye muchengeti anotanga neakanakisa vavariro uye anochengeta mapiritsi munzvimbo isingasvikike, asi dzimwe nguva nyore anokunda. Kana mwana wako aine fivhiri, iwe ungazopedzisira wave stashing iyo Tylenol muchiteshi chehusiku, uchichisiya pakaunda yekubikira, kana kuchikanda muhombodo yetote kana uchimhanya kunze kwemusuwo.
Ndidzo nguva dzino idzo apo vana vadiki vanowana mishonga munzvimbo dzavanogona kuona-senge pamatafura, mabhokisi emapiritsi, zvikwama, mabhegi manapukeni, mafiriji, uye makabati. Mishumo yakati wandei inoratidza kuti muhuwandu hwekukanganisa netsaona kunosanganisira vana vadiki, mushonga wacho wanga usiri munzvimbo yawo yekuchengetera kana yakajairika.
5 matipi-akachengeteka emishonga ekuchengetedza mishonga
Unochengeta sei mushonga? Shandisa aya akakosha ekuchengetedza mishonga mazano kuti uchengete vana vako vakachengeteka.
1. Funga nezve mushonga zvakanyanya.
Chero mishonga - inosanganisira pamusoro-pekutengesa uye mishonga yemakwenzi kana yekuwedzera- inogona kuva njodzi chaiyo kuvana, sekureva kwaJeanie Jaramillo-Stametz, Pharm.D., Mutevedzeri wapurofesa muitiro wemishonga kuTexas Tech University Health Sciences Center, Chikoro cheFarmacy. Kunyange madonhwe eziso uye mutambo wekirimu inogona kukonzera njodzi yekuchengetedza. Kuti uve nechokwadi chekuti mishonga iri nyore kuzivikanwa, chengeta mune yayo yekutanga kurongedza.
mashuga eropa rako anofanira kunge aripi
2. Chengeta meds pasingasviki uye kuona.
Nguva dzose chengetedza zvinodhaka munzvimbo yakavanda, yepamusoro-soro, zviri pasi pekuvharirwa nekiyi, inokurudzira Dr. Jaramillo-Stametz. Paunenge uchisarudza nzvimbo yakanaka, ramba uchifunga kuti vana vanokwira (semuenzaniso, kuenda kuchimbuzi kusvika kukiriniki yemishonga). Iyo Safe Kids 2017 chirevo chakaratidza kuti muhafu yema-over-the-counter mishonga yekuisa chepfu, zvaive nekuti mwana akakwira pachigaro, toyi, kana chimwe chinhu kuti asvike pairi.
3. Usavimba nepakeji isingagadziriswe nemwana.
Makapeti asingadziviriri vana uye ekuchengetedza vana chinhu chikuru chakagadzirwa-asi usavarega vachikunyengedza mukunzwa kwekunyepa kwekuchengeteka. Mishonga yekuchengetedza macaps haambove mwana- humbowo , Dr. Jaramillo-Stametz anosimbisa. Ivo mwana- nemishonga , asi kune vana kunze uko vachiri kugona kuvhura makapeti aya.
Vabereki nevachengeti vanofanira kugara vachiona kuti mishonga yemakapu yakavharwa nemazvo: Tendeuka kusvikira iwe wanzwa kubaya kana kusakwanisa kutendeuka.
4. Dzidzisa vana nezvekuchengetedza mishonga.
Kunyangwe kubva paudiki, zvakakosha kudzidzisa vana vako nezvekuchengetedza mishonga. Usambofa wakatsanangura zvinodhaka sesipi, uye ita shuwa kuti ivo chete vanoziva vanhu vakuru vanogona kuendesa zvinodhaka. Iwe unofanirwa zvakare kuvayambira kuti vasatombonwa mapiritsi emumwe munhu, senge ambuya kana shamwari yechikoro. Chekupedzisira, vadzidzise kuverenga marara emadhiragi-kunyangwe pamapiritsi epa-counter. Vana vako vanofanirwa kudzidza kuti zvinyorwa mitemo, pane kutungamira. Sezvo ivo pavanenge vachikura, tsanangurira kune pre-vechidiki uye vechidiki kuti kutora zvinopfuura zvakarayirwa dhizaini hakuzovabatsira kuti vapore chero nekukurumidza uye zvinogona kuvakuvadza.
zvakachengeteka here kutora mazano uye tylenol pamwechete
5. Raira vamwe nezve vana uye kuchengetedzwa kwemishonga.
Saizvozvowo kushoropodza, ita shuwa vamwe vanochengeta (vangave vanochengeta vana kana vanasekuru), tevera aya matipi ekuchengetedza-zvisinei kuti vari kumba kwako here kana kwavo. Maererano ne Kumusoro uye Kure , chirongwa cheCDC, Anenge mumwe chete paanasekuru navanasekuru vanoti vanochengeta mishonga yekunyorera munzvimbo dziri nyore kuwana, uye 18% vanochengeta mishonga yekutengesa munzvimbo dzinowanikwa nyore nyore.
Ndokusaka, vana vako vasati vashanyira vamwe, zvine hungwaru kukumbira varidzi vedzimba kuti vaise chero mishonga kunze kwekusvika nekuonekwa. Zvakare, udza chero munhu anochengetera mishonga muhomwe yake kuti aise mabhegi avo munzvimbo yakatarwa yemishonga yekuchengetera. Zvino, kana vachida kubvisa chero mapiritsi, vanofanirwa kudaro uye nekukurumidza vadzore mabhegi avo kunzvimbo yakaoma-kuwana-kuwana.
6. Declutter mushonga cabinet.
Kana iwe uine zvinyorwa zvekare zvinononoka, tsvaga kuti ungaite sei dzirase zvakachengeteka nekuvaisa mubhokisi rekudonha remushonga, kuvapuruzira, kana kuvasanganisa nemarara. Kana iwe uine mapapu asina kuvhurika, asina kuvhurwa, funga kuvapa kune rubatsiro izvo zvinogona kuzvifananidza nemumwe munhu anoda. Kana vasiri mumba, havagone kuve njodzi.
RELATED: Maitiro ekuti zvishandiswezve mabhodhoro emapiritsi
Ndezvipi zvandinosarudza zveOTC uye mushonga wekusvuta kurega zvinodhaka
Kushushikana uye kushushikana kunogona kukonzera ED?
Ndeipi mhedzisiro ye dexamethasone
zvinorevei kuva ne o positive ropa
yakawanda zvakadii zvekukurumidza kuchengetedza kushanya pasina inishuwarenzi
mushonga wakanyanya wekukosora wevakuru kuoma chikosoro
kurovedza muviri kunobatsira sei BP
chii chiri chepasi cheshuga renji chati